ကိုဗစ် ထက် ဆိုးတာ မြို့တွေထဲ ရောက်နေ ပါပြီ . .လူကို ချက်ချင်း သေစေ နိုင်ပါတယ် – GaMone Media
Homepage / Local News / ကိုဗစ် ထက် ဆိုးတာ မြို့တွေထဲ ရောက်နေ ပါပြီ . .လူကို ချက်ချင်း သေစေ နိုင်ပါတယ်
ကိုဗစ် ထက် ဆိုးတာ မြို့တွေထဲ ရောက်နေ ပါပြီ . .လူကို ချက်ချင်း သေစေ နိုင်ပါတယ်
တောကြီးမြွေဟောက်စစ်စစ်တွေမို့ သတိထားကြပါ။ မြို့တွေထဲ လူတွေကြားထဲ ကို ရောက်နေကြတာပါ။ တခါတုန်းကလဲ တကောင်ဖမ်းပြီးပြီး။ ခုနောက်တကောင်။ ယနေ့ (27.12.2020)ရက်နေ့ ညနေက ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းလာပါတယ်။ ဟိုတယ် တခုကပါ။မြွေတကောင် ဟိုတယ် ထဲ ဝင်လာလို့ ကူညီပါဦးတဲ့။
ဒါနဲ့ မော်လမြိုင် RESCUE ရုံးနောက်တန်းအဖွဲ့ကိုစက် နဲ့ပေါက် သတင်းပေးပြီး သွားဖမ်းစေခဲ့ပါတယ်။စိတ်ထင် ပုံမှန်ပဲပေါ့။ လူစည်ကားတဲ့ နေရာပဲလေ။မော်လမြိုင်မှာဆို ကျွန်တော့်တို့ မော်လမြိုင် RESCUE အဖွဲ့ဟာ နေ့စဉ် မြွေမဖမ်းပေးရတဲ့နေ့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ လင်းမြွေ /ငန်းစောင်းလား အများဆုံး မြွေဟောက်လားပေါ့ …ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ တောကြီးမြွေဟောက်စစ်စစ် ဖြစ်နေတာ။ ကိုယ်တောင် အံ့သြသွားတာ။ပရဟိတကိုတရုတ်(သက်တင်ဦး) ဦးစီးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မော်လမြိုင် Rescue အဖွဲ့ဝင်များမှ အဲကွန်းထဲ ဝင်ခွေနေတဲ့တောကြီးမြွေဟောက် ကို ခက်လက်ခဲခဲ ထုတ်ပြီး သေချာဖမ်းဆီးပြီး ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
တောထဲမှာသာနေပြီး တွေ့ရခဲတဲ့ တောကြီးမြွေဟောက်တွေမြို့ပေါ် လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေ ထိတောင် ရောက်လာနေပြီး။ နှစ်ခါ ရှိပါပြီး။ ကိုဗစ် က လူကို ချက်ချင်း မသေနိုင်ဘူး။ တောကြီးမြွေဟောက်ကတော့ ချက်ချင်း သေနိုင်တယ်။မြွေ အန္တရာယ်လဲ သတိထားကြပါလို့ သတိပေးပါတယ်။
ဇင်မိုး ..မော်လမြိုင် RESCUE ကွန်ယက်
ေတာႀကီးေႁမြေဟာက္စစ္စစ္ေတြမို႔ သတိထားၾကပါ။ ၿမိဳ႕ေတြထဲ လူေတြၾကားထဲ ကို ေရာက္ေနၾကတာပါ။ တခါတုန္းကလဲ တေကာင္ဖမ္းၿပီးၿပီး။ ခုေနာက္တေကာင္။ ယေန႔ (27.12.2020)ရက္ေန႔ ညေနက ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ဖုန္းဆက္အကူအညီေတာင္းလာပါတယ္။ ဟိုတယ္ တခုကပါ။ေႁမြတေကာင္ ဟိုတယ္ ထဲ ဝင္လာလို႔ ကူညီပါဦးတဲ့။
ဒါနဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ RESCUE ႐ုံးေနာက္တန္းအဖြဲ႕ကိုစက္ နဲ႔ေပါက္ သတင္းေပးၿပီး သြားဖမ္းေစခဲ့ပါတယ္။စိတ္ထင္ ပုံမွန္ပဲေပါ့။ လူစည္ကားတဲ့ ေနရာပဲေလ။ေမာ္လၿမိဳင္မွာဆို ကြၽန္ေတာ့္တို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ RESCUE အဖြဲ႕ဟာ ေန႔စဥ္ ေႁမြမဖမ္းေပးရတဲ့ေန႔ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ လင္းေႁမြ /ငန္းေစာင္းလား အမ်ားဆုံး ေႁမြေဟာက္လားေပါ့ …ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေတာႀကီးေႁမြေဟာက္စစ္စစ္ ျဖစ္ေနတာ။ ကိုယ္ေတာင္ အံ့ၾသသြားတာ။ပရဟိတကိုတ႐ုတ္(သက္တင္ဦး) ဦးစီးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ Rescue အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အဲကြန္းထဲ ဝင္ေခြေနတဲ့ေတာႀကီးေႁမြေဟာက္ ကို ခက္လက္ခဲခဲ ထုတ္ၿပီး ေသခ်ာဖမ္းဆီးၿပီး ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။
ေတာထဲမွာသာေနၿပီး ေတြ႕ရခဲတဲ့ ေတာႀကီးေႁမြေဟာက္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ လူစည္ကားတဲ့ ေနရာေတြ ထိေတာင္ ေရာက္လာေနၿပီး။ ႏွစ္ခါ ရွိပါၿပီး။ ကိုဗစ္ က လူကို ခ်က္ခ်င္း မေသႏိုင္ဘူး။ ေတာႀကီးေႁမြေဟာက္ကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေသႏိုင္တယ္။ေႁမြ အႏၲရာယ္လဲ သတိထားၾကပါလို႔ သတိေပးပါတယ္။
ဇင္မိုး ..ေမာ္လၿမိဳင္ RESCUE ကြန္ယက္
ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ CBFQ စခန္း။
Previous post လှေကားပေါ် ကတောင် ထိုင်လျက်သား ဆင်းရပြီး လမ်းတောင် မနည်းလျှောက် နေရ တဲ့ သူရဲ့ အခြေနေကို ပြသ လာတဲ့ မိုးအောင်ရင်ရဲ့ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
Next post တစ်ကမ္ဘာလုံး က အနုပညာရှင် များနဲ့အပြိုင် အချောဆုံးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်(၁၀၀) ထဲတွင် အသီးသီးပါဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ခင်ဝင့်ဝါ